Amalungelo abazali. | IXESHA
Njengabazali SibafunaBantwana Bethu:
-> Ukuba izimvo zesini ziye zasuswa kwiinkqubo ezikolweni.
-> Iinkqubo zokuxhaphaza ezijongana nazo zonke iintlobo zokuxhatshazwa ziyenziwa ezikolweni.
-Ukuba ootitshala banezikhokelo ezingqongqo malunga noko kufundiswa kwindawo yesini.
-> Ezi nkqubo zokuziphatha ngokwesondo zibuyela kwizifundo zebhayiloji yesondo.
-> Imifanekiso engaphezulu ngesondo iyasuswa kuzo zonke iinkqubo zesondo.
-> Ezo nkqubo zesondo zilungele ubudala.
-> Ukuze abantwana bangajongelwanga phantsi ngokuyalelwa ukuba bagcine iimfihlo zeklasi.
-> Ukuba abazali banelungelo lokufikelela kumxholo wazo naziphi na izixhobo zenkqubo yokwabelana ngesondo.
-> Ukuba abantwana abanikwa ukufikelela kwiiwebhusayithi ezinxulumene nesondo kunye nesini.
-> Ukuba abazali banelungelo lokumisela isimilo somntwana wabo.
-> Ukuba ulutsha, ngenkxaso yosapho, bavunyelwe ukusombulula nayiphi na imicimbi yesini ngokwemvelo.
-> Ukuba abazali banelungelo lokumisela umkhombandlela womntwana wabo ebomini.